2021 – Year – Channel Myanmar
On the Verge of Insanity (2021)(Complete)
You Are My Spring(2021) You Are My Spring(2021) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း***************************************အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၁၆)ထိ စ/ဆုံးKang Da Jung ဟာ five star အဆင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အလုပ်ရပြီးတဲ့နောက်သူနဲ့အတူ အလုပ်ဝင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက သူဟာစောပြီး မန်နေဂျာရာထူးတိုးသွားခဲ့ပါတယ်...သူမရဲ့ဒုက္ခကတော့ ယောကျ်ားရကံမကောင်းတဲ့ သူမရဲ့အမေကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားရတာပါပဲ...Joo Young Doo ကတော့ psychiatrist တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တစ်ပါးသူတွေရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာခံစားချက်တွေကို ကုစားပေးရတဲ့ လူတစ်ဦးပေါ့ ဒါပေမယ့် သူဟာ သူ့ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူနဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကိုမကယ်တင်နိုင်ပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာအမာရွတ်ရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်...ငယ်ငယ်လေးတည်းက စိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦး စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမြို့ခံလူသတ်မှုတစ်ခုမှာ ပါဝင်သွားပြီးဖြေရှင်းဖို့ အကြောင်းတွေဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့...သူတို့ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါဦး.... Episodes: 16Aired: Jul 5, 2021 - Aug 24, 2021Aired On: Monday, TuesdayGenres: Romance, Drama, Fantasy, MelodramaTranslated by Shoon Thu ...
The Devil Judge ( 2021 ) Kang Yo-Han ဟာ အပြစ်ရှိသူတွေကို မညှာမတာ အပြစ်ပေးတတ်တဲ့တရားသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်လို့ သူ့ကိုလူတိုင်းက "Devil Judge" လို့ခေါ်ကြပါတယ်သို့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဒီလို aura ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူမှမသိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လေးတစ်ခုက ကိန်းအောင်းနေပါတယ် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့သူဟာ တကယ်ပဲ သူရဲကောင်းအစစ်အမှန်လား ဘယ်လိုလူစားမျိုးစားလဲဆိုတာ ဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူနဲ့ပြိုင်ဘက်ကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားမှာ ရှိနေသူလေးကတော့ဘာမဆို ရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်ထားတတ်တဲ့ Jung Sun Ah ပဲဖြစ်ပါတယ်Sung Ah ဟာဆိုရင် ဆင်းရဲသားလေးအဖြစ်ကနေCooperate social responsibility foundation ရဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလို ပရမ်းပတာတွေဖြစ်နေတဲ့ တရားရေးရာလောကကြီးကို ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တရားမျှတမှုအတွက် ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့.......အကြံသမား Jung Sun Ah နဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ Kang Yo Han တို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ ဒီဒရမ်မာလေးပဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး Quality : HDTV 720pTotal Episode : 16Format : mp4During : 1hr ...
Nevertheless (2021) Complete ကဲ အားလုံးပဲ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အရို စီးရီးလေးလာပါပြီအရိုဆိုတာထပ်ကို နည်းနည်းလား များများလား မသိကို လွန်လွန်ကဲကဲ ပိုပါတယ်ဘာလို့ဆို သူရဲ့ rated ကိုက 18+ Restricted (violence & profanity) ဖြစ်နေလို့ပါဆိုတော့ကား ဆက်လမ်းအကြောင်းလေးကို ဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် ဘတ်ဂျယ်အွန်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ရည်းစားထားရတာကို စိတ်ကုန်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါဒါပေမယ့်သူက ကောင်မလေးတွေကို အပျော်စိတ်ကစား ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ ဆရာတစ်ဆူပါပဲယူနာဘီ ကတော့ အချစ်ကို အယုံအကြည်မဲ့နေတဲ့ ကောင်မလေးပေါ့သူတို့နှစ်ယောက် တွေ့ရာကနေ ဘယ်လိုတွေ ရိုပြီး ဘယ်လိုတွေစောင်ကိုက် ကြည့်ရမလဲကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့ကြရအောင်နော် ။ Native Title: 알고있지만, Episodes: 10 Aired: Jun 19, 2021 - Aug 21, 2021 Aired On: Saturday Original Network: jTBC, Netflix, Netflix, ...
TMDb: 8.5/10 7,256 votes
Nevertheless (2021) Complete
You Are My Glory (2021) ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမဲ့ကားလေးကတော့ ကိုယ်တွေရဲ့ မင်းသမီးချောလေး dilraba နဲ့love020ထဲက ရှောင်းနိုင်လေး (yang yang)တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါနော်ချောင်ကျင်းကျင်းကတော့ Honor of Kingsဂိမ်းရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ကျင်းကျင်းဟာ ဂိမ်းဆော့စကေးအလွန်ညံကြောင်း ​သူ့ပရိတ်သတ်တွေကြားထဲမှာ သတင်းတွေပျံ့နှံ့သွားပြီး သူကျွမ်းကျင်ကြောင်း သက်သေပြဖို့အတွက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်ပြိုင်ဖို့ရာ ဖြစ်လာပါတော့တယ်ယွီထူဆိုတဲ့ ကောင်ချောလေးကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ညဏ်ကြီးရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လတ်တလော အလုပ်မှာ အခက်အခဲနဲ့ကြုံနေရပြီး စိတ်ပြေလက်ပျောက် honor of kingsဂိမ်းကို ဆော့နေတဲ့ ကျွမ်းကျင်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျင်းကျင်းနဲ့ ယွီထူဟာတော့ အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက အတန်းဖော်တွေပါ ကျင်းကျင်းဟာ အရမ်းချောတဲ့ ယွီထူကို တစ်ဖက်သက်ကြိုက်ကာဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးအငြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်း​ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ ၁၀နှစ်ကြာပြီးနောက် ဂိမ်းလောကမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဆရာနဲ့ တပည့်အဖြစ်ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဘယ်လို romanceတွေ ...
Hit & Run (2021) Season 1 [COMPLETE] Action ကြိုက်သူတွေအတွက် Hit and Run ဆိုတဲ့ TV series လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် IMDB rating 7.2 ထိရထားပါတယ်။အစ္စရေးအမေရိကန် အက်ရှင်စီးရီးလို့ ပြောရမှာပါဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာက အစ္စရေးနိုင်ငံ တဲအဲဗစ်မြို့မှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အစ္စရေးလူမျိုး ဧည့်လမ်းညွန် ဆာဂေဆိုသူဟာ အမေရိကန်အကမယ်လေး ဒန်နီရယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းနေနိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ ရထားတဲ့ အယ်လာဆိုတဲ့ သမီးတစ်ယောက်လည်း ရှိပါတယ် သူတို့ရဲ့ မိသားစုဘဝလေး သာယာပျော်ရွှင်နေချိန်မှာပဲ ဒန်နီရယ့်ကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မတော်တဆမှုကြောင့် ဒန်နီနယ် အသက်ဆုံးရှူံးခဲ့ရပါတယ်မတော်တဆမှုမှာ ကားတိုက်ပြေးသွားသူတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်မိတဲ့အခါ သာမန်မတော်တဆမှု မဟုတ်ဘဲ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခံရတာ ဖြစ်ကြောင်း တစစနဲ့ သိလာရပါတော့တယ်ဆာဂေကိုယ်တိုင်က သူ့ဘဝတလျှောက်လုံး ဧည့်လမ်းညွှန်အဖြစ် အသက်မွေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ယခင်အလုပ်ရှင်ဟောင်းရဲ့ ငြိစွန်းမှုကြောင့် သူ့ဇနီးသေဆုံးရတယ်လို့ ယူဆမိပါတော့တယ်ဆာဂေတစ်ယောက် ဒီအမှုကို ရဲ‌တွေ ဖြေရှင်းတာထက် သူကိုယ်တိုင် ...
Hit & Run (2021) Season 1 [COMPLETE]
The Witch’s Diner(2021) Witch's Dinner  ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းကတော့အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဂျောင်ဂျင်(Nam Ji Hyun) ဟာ အမေဖြစ်သူနဲ့အတူစားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ဖွင့်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ရောင်းအားကောင်းနေတဲ့ဂျင်တို့ရဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးက ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ အပြိုင်အဆိုင်စီးပွားရေးကြောင့်ဆိုင်ပိတ်ဖို့အထိပါ ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။ ထူးဆန်းစွာနဲ့ ဂျိုဟီရာ(Song Jihyo) ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမ ရှေ့ကိုပေါ်လာပြီး သူ့ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကိုငှားဖို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။စုန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျိုဟီရာ ဖန်တီးတဲ့ အစားအသောက်တွေက လူတွေရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးနိုင်တာမလို့ စားသောက်ဆိုင်က နာမည်ကြီးလာပါတော့တယ်။ အတောမသတ်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့လောဘတွေ​ရယ် ရန်ကိုရန်ခြင်း လက်စားချေချင်ကြတဲ့လူတွေကို စုန်းမဖြစ်တဲ့ဂျိုဟီရာတစ်ယောက် ဘယ်လိုဆန္ဒတွေဖြည့်ဆည်းပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ Witch's Diner ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Translated by : Htike Aung WIn, Kim Hana, Jerrica, Shwe PyaeEncoded by : YK Episode 1- Yoteshin / ...
Racket Boys (2021) Racket Boys (2021)Reply 1994, Prison Playbook တို့ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ ဂျောင်ဘိုဟွန်း ရဲ့ လက်ရာမွန် နောက်တစ်တွဲ ထွက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။ဒီတစ်ခါတော့ ကြက်တောင်ကစားကြတဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းသားလူငယ်လေးများအကြောင်းပါ။ကြက်တောင် အားကစားကို ဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက်တော့ အတော်လေး ချဉ်းကပ်မိဦးမယ့်ကားပါ။၁၆ နှစ် အရွယ် Generation Z လူငယ်မောင်မယ်များရဲ့ စည်းလုံးမှု၊ ညီညွတ်မှုတွေကို မြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ......ယွန်းဟွန်းဂျုံး က အတော်ဆုံး ကြက်တောင်ရိုက်ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာ ဟယ်နမ် က အလယ်တန်းကျောင်းတစ်ခုရဲ့ ယောကျာ်းလေး ကြက်တောင်အသင်းမှာ နည်းပြလုပ်ဖို့အသစ်ရောက်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လစာသုံးလစာကြိုထုတ်လို့ရလို့ ပျော်နေတဲ့ ဟွန်းဂျုံတစ်ယောက် အသင်းက နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲမဝင်နိုင်တဲ့အခါ ....ထောက်ပံ့ငွေရပ်တန့်ပြီးတော့ လစာမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါသိလိုက်ရတယ်လစာရဖို့အတွက် အသင်းကိုလူပြည့်အောင်စုနိုင်ပြန်တော့လည်း ကျောင်းသားတွေနေစရာမရှိလို့ အဖွဲ့ကွဲမလိုဖြစ်ပြန် .....နောက်ဆုံးတော့ သူအိမ်ကိုပဲ ခေါ်လာလိုက်ရပါတော့တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ဟွန်းဂျုံတစ်ယောက် ဒီကြက်တောင်အသင်းကို စုစည်းနိုင်ပါ့မလား????? လစာပြန်ရဖို့အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်အောင် အသင်းသားတွေကို သင်ကြားပေးနိုင်မလား???? သားဖြစ်သူကို ဘေ့စ်ဘောကစားတာ တားမြစ်ထားရတဲ့ အကြောင်းကရော ဘာဖြစ်မလဲ????အဓိကအနေနဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေ ...
River Where the Moon Rises (2021) River Where the Moon Rises (2021)ဇတ်လမ်းတွဲအညွှန်း********************************************************အပိုင်း (၁ မှ ၂၀)ထိ စ/ဆုံးပထမ ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်သူ Kim Ji-soo ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာအချို့ရှိတာကြောင့်ဒီစီးရီးရိုက်လက်စအပိုင်း(၆)အပြီးမှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတာအားလုံးအသိပါ..အပိုင်း(၇)ကစပြီးမင်းသားသစ် Na In Woo နဲ့ဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့လို့ မင်းသားသစ်ကိုမကြိုက်တာမဟုတ်ပေမဲ့ပရိတ်သတ်တွေ အတော်စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်...သို့ပေမဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတာရော မင်းသမီးဘဲပေါက်လေးဖန်တောင့်တာရောကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါ့မယ်...အခုက ဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ ဒါရိုက်တာက မင်းသားသစ်နဲ့ကို ပထမ(၆)ပိုင်းကို မလိုတဲ့အခန်းတွေဖြုတ် တစ်ချို့လည်းအနည်းငယ်ပြင်ဆင်ပြီးREFILMဆိုပြီးပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်...အခုက အဲ့ဒီအပိုင်း(၆)ပိုင်းကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်....မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် REFLIMလို့ရေးထားတဲ့(၆)ပိုင်းရယ် အောက်က အပိုင်း(၇)ရယ်ကိုဆက်ဒေါင်းပြီး စ/ဆုံးကြည့်ရုံပါပဲ... Kim Ji-soo နဲ့ရိုက်ထားတဲ့(၆)ပိုင်းလည်းမဖျက်ဘဲထားမှာမို့ မျက်စိမူးနောက်နေမှာစိုးလို့ရှင်းပြထားတာပါ...အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ... ==============မင်းသမီးအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့ပြီး စစ်သည်အဖြစ်ပျိုးထောင်ခံခဲ့ရတဲ့ Pyeonggangဟာရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး ဂိုဂူလျောနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်မဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူပါသူ့ရဲ့အိပ်မက်ပြည့်မြောက်ဖို့ဘာမဆိုလုပ်မဲ့သူဖြစ်ပြီး သူမအိပ်မက်အတွက်ဂိုဂူလျောရဲ့အာဏာအရှိဆုံးသူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့အခါသူပေးဆပ်ရမှာတွေမှာကဘာ‌တွေလဲ ဘုရင်မဖြစ်ချင်တဲ့သူ့အိပ်မက်ပြည့်မြောက်နိုင်ပါ့မလားတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့Pyeonggangတစ်ယောက် ရိုးသားတဲ့Ondalနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇတ်လမ်းလေးကို ဘာသာပြန်ပေးထားကြသူတွေကတော့Lwin Lwin Aung, Mi Moe Set & Htet Nandar Aung တို့ဖြစ်ကြပါတယ် Quality – 720p Duration – ...
The Innocent(2021) IMDB Rating 7.9/10 User 20Kအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် The Innocent , စပိန်စကားနဲ့​ပြောရရင်Inocente, မြန်မာမှုပြုလိုက်ရ​င်​တော့ "အပြစ်ကင်း​လေသူ"​ပေါ့ဒါ​ပေမဲ့ ဒီseriesထဲက ဇာတ်​ကောင် မက်တီယိုဗီဒယ်က​တော့အပြစ်ကင်းသူဆိုတာထက် "ကံဆိုးသူ​မောင်ရှင်" လို့​ခေါ်ရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်ဇာတ်လမ်းအစမှာတင် အကိုဖြစ်သူရဲ့ရန်ပွဲမှာ ဝင်ပါမိရင်းမ​တော်တဆလူသတ်မှု​ကြောင့် ​ထောင်ကျခဲ့ရသူ၊ ထောင်က​နေ အာမခံနဲ့လွတ်ရက်ရပြန်​​တော့လည်း မိဘနှစ်ပါးရဲ့နာ​ရေး၊ ​ထောင်က​နေလွတ်လာပြီး ဘဝတစ်ခုပြန်စမယ်​တွေးပြန်​​တော့ချစ်ရတဲ့အကိုဖြစ်သူကပါ ​လေဖြတ်​ရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားပြန်​ရောဒီလိုကံဆိုးလွန်းတဲ့ ဇာတ်လိုက်​ကျော်မက်တီယိုရဲ့ ဘဝထဲကိုမိန်းက​လေးတစ်​ယောက် ဝင်​ရောက်လာပြီး သာယာတဲ့အိမ်​​ထောင်ရေးတစ်ခုကို ​ပျော်​ပျော်ရွှင်ရွှင်အစပြုဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်ဒါ​ပေမဲ့ အဲ့ဒီအကြံဟာလည်း သူ့ရဲ့ ရှုမငြီးတဲ့ချစ်ဇနီးဆီ ဝင်လာတဲ့Unknown Numberနဲ့ ဖုန်းတစ်​​ကောလ်​ကြောင့် ​ဇောက်ထိုးမိုး​မျှော်ဖြစ်သွားရပြန်ပါတယ်သူ့ဇနီးကိုဆက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဟာ ဘယ်သူ့နံပါတ်လဲ၊ သူ့ဇနီးက သူ့ကိုလိမ်ညာထားတာလား၊ ​နောက်ကွယ်မှာ​ဖောက်ပြန်​နေတာလားဆိုတဲ့ပြဿနာအ​သေးစား​လေးက​နေသပွတ်အူလိုရှူပ်​ထွေး​ပွေလီလွန်းတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုထဲကိုမက်တီယိုတစ်​ယောက် ပါဝင်ပတ်သတ်မိသွားတဲ့အခါ.......စပိန် Crime,Thriller,Mystery ရုပ်ရှင်​တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေဟာ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ခိုင်မာမှု၊ ထင်မထားတဲ့ Plot twist​တွေများစွာပါဝင်မှု၊သရုပ်​ဆောင်​တွေရဲ့ သဘာဝကျမှု​ကြောင့် အဆင့်အတန်းတစ်ခုမှာ ရှိ​နေမှန်း Money Heist, Elite, The Platform, Alta Mar, ...
Love (ft. Marriage and Divorce)Season2 Love (ft. Marriage and Divorce)Season2အညွှန်း************************************************အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၁၆)ထိ စ/ဆုံးSeason 1 ထွက်ပြီးသားပါ...လောင်မြိုက်ခြင်းတွေနဲ့ ပျော်မွေ့နေတဲ့သူတွေအတွက်လို့ဆိုတာထက် ဒီလောကကြီးမှာဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိပါ့လားဆိုတဲ့အသိနဲ့ ထွင်းဖောက်သုံးသပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် S2 ကိုဆက်လက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...အညွှန်းကတော့ S1ကဟာပဲထားလိုက်ပါ့မယ်...ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ပုံမှန် ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတို့ ချစ်ဖို့အရေးကြိုးစားနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူး....အဲ့အဆင့်တွေထက်ကျော်လွန်ပြီး အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်သည်တွေသမီးရည်းစားဘဝတုနး်ကလို ချစ်နိုင်သေးရဲ့လားဆိုပြီး ပုံစံမတူတဲ့ စုံတွဲ(၃)တွဲကို ရိုက်ပြထားတာပါ....ပျင်းစရာကြီးလို့မထင်လိုက်နဲ့...တကယ့်လက်ရှိမှာ ဒီလိုတွေတကယ်ဖြစ်နေတာ....တရားသူကြီး Park Sa Hyun ဟာ drum တီးခတ်နေတဲ့ Boo Hye Ryung ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားပြီး လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ် ...အိမ်ထောင်သက်သုံးနှစ်ရှိပြီး ကလေးမရှိသေးသော ပထမဆုံးစုံတွဲ.....Shin Yoo Shin ကတော့ဆေးရုံဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး radio show တစ်ခုရဲ့ PD ဖြစ်တဲ့ Sa Pi Young ရဲ့ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်းပေါ့ သူမဟာ သူမရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအတွက် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့သူလေးပါ,......Lee Si ...
Love (ft. Marriage and Divorce)Season2